Sweden Xijaabka oo laga Mamnuucay Gabdhaha dhigta Dugsiyada Xanaanada ee Degmada Staffanstorp
HomeWararka Maanta SomaliskaSweden Xijaabka oo laga Mamnuucay Gabdhaha dhigta Dugsiyada Xanaanada ee Degmada Staffanstorp
June 1, 2019 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Sweden, Warka ugu akhriska badan 0
Waxaa soo baxaya jawaabo la xiriira go’aankii ay degmada Staffanstorp ugu codeyay mamnuuca xijaabka madaxa la saarto ee gabdhaha dhigta dugsiyada xanaanada illaa iyo fasalka todobaad ee dugsiga dhexe.
Mubaarak Cabdiraxmaan oo ah siyaasi ka tirsan golaha deegaanka magaalada Malmö isagoo metela xisbiga Socialdemokraterna ayaa sheegay in magaalada Staffanstorp aysan aheyn markii ugu horeysay ee ay gaarto go’aano noocan ah.
Mubaarak Cabdiraxmaan ayaa aaminsan iney yar yihiin caruurta ay arrintan saameyso ee ku nool magaalada Staffanstorp balse go’aankani ujeedada ka danbeysa ay tahay in dadka ajnabiga loo sheego inaan laga dooneyn magaalada Staffanstorp.
Mubaarak Cabdiraxmaan sidoo kale ku tilmaamey go’aanka degmada Staffanstorp inuu yahay mid aan waafacsaneyn xoriyadda diinta ee ku qoran dastuurka dalka.
Dhanka kale Sara Mohammad oo ah asaasaha ururka GAPF (Glöm aldrig Pela och Fadime) ayaa ku raacsan in la mamnuuco xijaabka madaxa ee gabdhaha iyadoona sheegtay in mamnuucidda xijaabku ay qeyb ka tahay halganka looga soo horjeeda fal-dembiyeedka sharf dhowrka ” hedersrelaterat våld” waxa loo yaqaanno.
Sababta ka dambeeysa go’aanka golaha deegaanka:
Go’aanka mamnuucidda xijaabka hablaha ee uu gaaray golaha deegaanka ee degmada Staffanstorp fiidnimadii arbacadii ina dhaaftay ayaa ka dambeeyay howlo uu maamulka degmadu kaga hortageyo sidii loo baabi’in lahaa nidaamka waxyeelooyinka sharaf dhowrka – hedersförtryck waxa afka iswiidhishka lagu yiraahdo.
Go’aanka degmada waxaa isku raacay xisbiyada Moderaterna iyo Sverigedemokraterna, halka uu xisbiga Socialdemokraterna ka soo hor jeestay amuurtaa.